दिल्लीबाट फर्काइएका युवती भन्छन्-आफूखुसी काम गर्न हिँडेका हामीलाई किन दुःख दिएको ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार → दिल्लीबाट फर्काइएका युवती भन्छन्-आफूखुसी काम गर्न हिँडेका हामीलाई किन दुःख दिएको ?
दिल्लीबाट फर्काइएका युवती भन्छन्-आफूखुसी काम गर्न हिँडेका हामीलाई किन दुःख दिएको ?
August 7, 2015४४३ पटक
२२ साउन, काठमाडौं । दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई नेपाल फिर्ता पठाएका २७ युवतीमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले बयान लिन थालेको छ । दिल्ली प्रहरी र महिला मन्त्रालयको समन्वयमा ती युवतीलाई मंगलबार स्वदेश फिर्ता गरिएको थियो ।
ब्युरोले बुधबार १४ जनासँग बयान लिइरहेको छ । बयानका क्रममा युवतीहरुले आफूखुसी काम गर्न हिँडेका आफूहरुलाई किन अपराधी जसरी खोजेर ल्याई दुःख दिएको भन्दै प्रहरीसमक्ष गुनासो गरेका छन् । घरेलु कामदारका रुपमा इराकको कुर्जकिस्तान हिँडेको बयान उनीहरुले दिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
फरकफरक जिल्लाका युवतीहरुलाइर्क्ष् कसरी भेला गराएर एजेन्टले दिल्लीसम्म पुर्‍यायो भन्नेमा ब्युरोले अनुसन्धान केन्दि्रत गरेको छ । उनीहरु सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकका हुन् ।